DOWNLOAD Junkers Judia-52 FS2004 - Rikoooo
The Junkers Judia-52 bụ ndị kasị ama German ụgbọelu n'oge agha. Ọ ama esịn paratroopers na Holland, Crete na mgbe e mesịrị na Ardennes.
Nke a ugbo elu bụ onye na-adịghị na nnọọ nta egbe. N'ihi ya, ọ tara ahụhụ ọtụtụ losses fọrọ nke nta niile ọzọ, akpan akpan ke Crete na Stalingrad. Ọ buru na ọkọnọ agha ke North Africa, Stalingrad ya na Baltic States. O jekwara ozi dị ka a mail iga na China na e onwem na floats ibufe osisi na wilds nke Canada.
Ndị Judia-52 ga-efe site Berlin ka Rome ke awa asatọ n'elu Alps, otu nnukwu feat n'oge ahụ. The ikpeazụ Judia-52 e wepụtara na Swiss Air Force ná ngwụsị afọ ndị 80s. Ihe karịrị 50 afọ mgbe ...! The akụkọ ihe mere eme nke a ụgbọelu dị ebube. Anyị agaghị echefu a iconic ugbo elu!
Ọ bụ add-on mara ezigbo mma, ya na ụdị 3 na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke gụnyere France of Air France na nke Luftwaffe.
The panel bụ n'ụzọ zuru ezu arụ orụ na 2D na 3D (VC virtual kokpiiti).
Ke adianade do, ị pụrụ ọbụna gaa n'ime ụgbọelu na na 3D.
A mara mma ụgbọelu nke Fans nke ochie ụdị.
Mma ụgbọ elu!
Onye edemede: Pierino Primavesi